Xamaas oo ka jawaabtay duqeyn Israel la beegsatay GAZA • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Xamaas oo ka jawaabtay duqeyn Israel la beegsatay GAZA
March 26, 2019 - By: Hanad Askar
Dowlada Masar ayaa la sheegay inay waan-waan ka dhex wado ururka Xamaas ee maamula dhulka Gaza ee Falastiin iyo Israel kadib markii ay labada dhinac shalay & Xalay gantaalo isku tuureen.
Xiisadan ayaa bilaabatay subaxnimadii shalay oo Isniin ahayd kadib markii la sheegay in gantaal laga soo tuuray Gaza uu ku dhacay duleedka magaalada Tel Aviv, duqeyntaasi oo ay ku dhaawacmeen 7 qof oo reer Israel ah.
Militariga Israel ayaa shalay gelinkii danbe iyaguna duqeyn la beegsaday xarumaha ururka Xamaas ee ku yaal magaalada Gaza, iyagoo ku eedeeyey ururkaasi inuu ka danbeeyey gantaalkii lagu soo tuuray nawaaxiga magaalada Tel Aviv.
Wasaarada difaaca ee Israel ayaa sheegtay inay duqeeyeen xarunta sirdoonka Militariga ee Xamaas, balse ururka Xamaas ayaa sheegay in duqeynta Israel lala beegsaday xafiiska hogaamiyahooda Ismail Haniya iyo xarumo ciidamada lagu tababaro balse goobahaasi kahor duqeynta laga daadgureeyey dadkii ku sugnaa.
Xamaas ayaa dhankooda xalay iyaguna jawaab ka bixiyey duqeyntii Israel iyagoo gantaalo ku tuuray dhulka Israel maamusho.
Waxaa marwalba dhaca duqeynmo noocaan ah xiliyada lagu jiro doorashada Israel oo la filayo inay dhacdo bilowga bisha April, xukuumada xagjirka ah ee Benjamin Netanyahu ayaa jecel inay shacabka Israel u muujiso inay tahay mid si adag ulla dhaqanta maamulka iyo shacabka reer Falastiin.